Uchungechunge lwe-860SL Swinging Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
I-Series 860SL Swinging Dragon® dredge iyinhlanganisela eshintshashintshayo yesitebhisi kanye ne-cutter suction suction dredge ekwazi ukufinyelela ekujuleni kokudonsela phansi kuze kufike ku-30 ​​'(9.1 m). Le modeli yesitebhisi eguqukayo ehlala isikhathi eside inika amandla ukusebenza emifuleni emincane noma eziteshini. Futhi, i-860SL ilungele iningi lezimayini, isihlabathi namatshe, ukususwa kwendle yamachibi, kanye namaphrojekthi wokulondolozwa kwamanzi asezingeni eliphakathi nendawo.
I-860SL DREDGE ADVANTAGES
I-dredge ephathekayo kulula ukuyihlanganisa ngaphandle komzamo omncane esizeni.
Imishini eboshwe ngokugcwele inikeza ukuvikelwa negumbi elanele lokugcinwa njalo.
Imodi ejwayelekile yokudonswa ivumela ububanzi be-swing ebanzi ngokunqunywa okulungile nokunomkhiqizo osebenzayo.
Usayizi wokukhipha: I-14 ”x 14” (350 mm x 350 mm)
Injini eyi-Caterpillar C-32: I-800 HP (596 kW)
Ubunzulu bokuDonswa Okuphezulu: I-30 ′ (9.1 m)
Ukudonsa impumuzo ohlangothini.
Uhlelo lokubeka i-Dredge.
Injini yokucindezela umlilo uhlelo.